January 26, 2021 Xuseen 6
Puntlandtimes (Boosaaso)-Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa farriin u diray odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan isimada kunool deegaamada Puntland, xilli uu ka hadlayey munaasabad lagu qabtay magaalada Boosaaso.
Axmed Karaash ayaa ugu baaqay dhammaan isimada deegaamada Puntland inay ku koobnaadaan arrimaha Puntland isla markaana ay awoodda saaraan arrimaha dhaqanka intii ay ku mashquuli lahaayeen siyaasadda iyo arrimo kale.
“Isimadu waa kuwii aasaasay Puntland, waana marjicii loo laaban lahaa marka haddii ay hor ordaan oo siyaasad iyo safaro kale galaan waa ku milmayaan” ayuu yiri Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo sheegay in isimadu ay yihiin derbi u dhexeeya dowladda iyo shacabka loona baahan yahay inay kala ilaaliyaan si shaqooyinka dowliga ah aysan u nusqaamin.
Dadku aragti ayeey leeyahiin waana xor fikirkiisa in uu ka dhiibto hogaanka siyaasadeed ama sheikh ha noqdo ama dhaqan ha noqdo ama aqoon yahan ha noqdo ama iwn…..
Siyaasiga waxa lagu aaminay xoolaha ummadda in uu maamulo, shaqsi kasto xaq waxuu u leeyahay maamulkaas ammaan iyo dhaliilba ka sheegi karo.
Mid waan ogolahay nin naboodoon haduu jago xildhibaan qaato in uu nabadoonimada ka tagaayo oo shaqsiga in uu labo jago isku qabanin.
Axmed Karaadh waa Donald Trump Puntland.. Afka ayuu duubayaa, waa xanaaqsan yahay 24/7, wuu ciil qabaa haddana ma tegukaro degmada uu ku dhashey Taleex… Ma isagaa wax isu dhimey mise cid kale ayuu eersayaa..
Isimada muxuu ku haystaa ? ma farmaajo ayay taageereen.. kkkkkkkkkkk
Ninkan hadlaya miyuusan ogayn xildhibaannada asaga soo doortay ay soo xuleen Isimadu, miyuusan ogayn in kuwa Federalka ay ayagu soo xuli doonaan 2021…Siyaasadda ay ka maqan yihiin Isimadu maxay tahay….Miyuu moogyahay in siyaasadda Somalia ku dhisan tahay 4.5 qabiil, mase oga miyaa in 66 Xildhibaan lagu soo xulo qabiilada PL dega, mase oga miyaa Madaxa Ugu Sarreeya qabiilka Inuu yahay Isimka ee uusan ahayn M.Weynaha ama Kuxigeenka macmalka ah..Qofku hadduusan aqoon lahayn ee ku yimaado qaab qabyaaladeed oo haddana inkiro doorka madaxda qabiilka (isimada) ma garanyo waxa lagula dhaqmo ama lagu tilmaami karo!!
Maansha alaah walee axmed karaash waa nin culus runta ayuu ka hadlay waa in isimadu ay Ku koobnaadaan danaha qabiilada iyo maslaxadooda waa in aysan u hanqal taagin waxa ay cada qaatayaasha xamar jooga damaca an yihiin nice job madax weyne axmed karaash 🎤👏👏👏👏
Meeshan ninkan aan gurigii uu ku dhashay tegin karin ka talinayo waa meel aan wax Rajo ah lahayn waa yibir sabaanyaha laga siiyo beesha majeerteen duf ku bax